Raad Raac News Online – Wenger Oo Arteta U Magacaabay Kabtanka Cusub Ee Kooxda Arsenal
Wenger Oo Arteta U Magacaabay Kabtanka Cusub Ee Kooxda Arsenal
Faarax August 10, 2014 0
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa Mikel Arteta u magacaabay kabtanka cusub ee kooxda Arsenal kadib markii uu Thomas Vermaelen u wareegay kooxda Barcelona booskaa baneeyay.
Arteta oo hogaaminayay kooxda Arsenal ee 3:0 kaga badisay kooxda Man City ayaa xidhan doonta calaamada kabtanka ee kooxda Gunners. Difaaca xulka qaranka jarmalka ee Mertesacker ayaa Arteta u noqondoona Kabtan ku xigeenka.
Arteta oo ay da’diisu tahay 32 jir ayaa galaya xili ciyaareedkii saddexaad ee uu joogo Emirates Stadium wuxuna hore kabtan ugu soo noqday kooxda Everton oo uu hore ugu soo ciyaari jiray. Wenger ayaa la waydiiyay ciyaartoyga ka badalidoona kabtanka difaacii Vermaelen ee kooxda iskaga tagay wuxuuna ku jawaabay: “kow waa Arteta, Laba waa Mertesacker. Ateta wuxuu noqon doonaa Kabtanka halka uu Mertesacker ka noqondoono kabtan ku xigeenka”.
Wenger ayaa amaanay Vermaelen wuxuuna yidhi: “Thomas Vermaelen anigaa u ogolaaday inuu kooxda ka tago inta uusan xili ciyaareedku bilaamin. Si joogto ah umuu ciyaarayn, wuxuuna kooxda kaga tagay sharaf iyo fahan fiican. Way adag tahay inaad ciyaartoy noocaas oo kale ah kooxda ku hayso haddii uuna joogto u ciyaarayn”.